Wasaaradaha internetka - Kalluumaysiga oo leh 21st Century Net
Kalluumaysiga oo leh 21st Century Net
Wasaaradaha internetka ayaa la aasaasay bishii May 1, 1995. Wasaaradaha Internetku waxay bixiyaan kaniisado badan iyo tirooyin tiro badan oo Masiixiyiin ah iyo jacaylka naftayda iyo macluumaadka ku saabsan Masiixa iyo kaniisaddiisa. Ereyga Ilaah ayaa loo diyaariyey qof walba oo ku jira internetka, iyo bartayaalka internetkeena waxaa akhrinaya dadka ku nool wadamada reebaya akhriska Qorniinka Quduuska ah. Waxaan ku bixinnaa barta internetka ee Ingiriis, Isbaanish, Ruush, iyo Fiyatnaamiis. Tan waxaa ka mid ah nuqul ka mid ah King James Version, Kitaabka Quduuska ah ee Maraykanku, iyo Kitaabka Quduuska ah ee La Yidhaahdo. Daraasadaha Kitaabka Qudduuska ah ee internetka ayaa loogu talagalay dadka aan Masiixiyiinta ahayn iyo Masiixiyiinta Xayeysiisyada Boostada ee Boosteejada ah waxay bixiyaan macluumaad muhiim ah oo ku saabsan wararka iyo ogeysiisyada dhammaan kaniisadaha Masiixa ee adduunka.
Wasaaradaha Internetku waxay bixiyaan Wacyigelinta Dunida ee Kaniisadaha Masiixiga ah, Xubinta Aqoonsiga Caalamiga ah ee Kiristanka, Iskoolada iyo Dugsiyada tacliinta, Jaamacadaha, Machadyada Kitaabka Quduuska ah iyo Dugsiyada Wakaalada, daabacaadaha Walaalaha iyo joornaalada, buugaagta masiixiga, kaniisadaha leh internetka internetka, Kaniisadaha Masiixa.
Dad tiro badan oo caan ah oo loo yaqaanno wasaaradaha ayaa loo yaqaan 'Internet Community' iyadoo loo marayo kaniisadda-of-Christ.org sida World Bible School, Taxanaha Qoraallada Qorshaha, Laadarka Hogaamiyayaasha, Lambert Book House, Mashruuca USA Today, World Broadcasting, Ereyada Wasaaradda Warfaafinta Life, Jaamacadda Faulkner, iyo kuwo kale oo badan.
Wasaaradaha internetku waxay ku deeqeen meelo badan oo ka mid ah jameecooyinka iyo wasaaradaha adduunka oo aan haysan lacagaha loo baahan yahay si kor loogu qaado Injiilka Masiixa ee internetka. Sayidku wuxuu doonayaa in Internet-ka Wasaaraduhu ay sii wadi doonaan sida ugu wanaagsan ee ay ugu adeegaan kaniisadaha Masiixa iyo inay kor u qaadaan Evangelism online-ka.
Waad ku mahadsan tahay taageeradaada duco.